File Hosting Site: Max. Upload Size Additional Comments (on free accounts) 4Shared.com 100 MB Files deleted after 30 days no login.5GB max total per account. 35MB.com 35 MB 35 MB account limit. AllMyData.com 1 GB 1 GB monthly limit bandwidth. Anywhere Enterprises 50 MB Limit of 50 daily downloads. Atgig.com 1 GB 100 GB monthly bandwidth limit. AxiFile.com 200 MB Supports FTP. Badongo.com 1 GB 12 GB/day limit on free ‘member’ accounts. Inactive files deleted after 90 days. BigFilez.com 200 MB Inactive files deleted after 30 days. BigUpload.com 500 MB Inactive files deleted after 30 days. BigRoad.net no limit Apparently no limits on files whatsoever. Bonpoo.com 250 MB No music or movie files (*.RAR files OK?) Box.net 10 MB 10 MB? - good for one song, we guess. BOXSTr.com 250 MB 500 MB daily download limit on free5GB accounts. Come2Store 30 MB Inactive files deleted after 20 days. Datenklo.net 250 MB Inactive files deleted after 60 days. DepositFiles 300 MB On registered accounts, automatic file splitting into 100 MB RARs. divShare.com 200 MB5GB free storage, 50 GB monthly bandwidth, files never expire. DropSend.com 1 GB5sends per month limit (1 GB each max.), 250 MB free online storage. Easy-Share 100 MB FTP and remote access support. EgoShare.com 300 MB Inactive files deleted after 30 days. esnips.com unknown5GB storage on free accounts. flyupload.com2GB Huge2GB limit per file! Inactive files deleted after 60 days. filecloud.com 25 MB 200 KB/s speedcap on free accounts. FileDen.com 50 MB 1 GB storage space,5GB monthly max. bandwidth. FileFactory.com 300 MB Upload up to 25 files at the same time on registered free accounts. FileForwarding 50 MB Supports only ZIP and RAR files. FileFront.com 1 GB Passworded archives are deleted. FilePoint 500 MB 60 day retention on inactive files. Files.to 150 MB Multiple upload file support. FileUL.com 25 MB All services are completely free of charge. FileUPYOURS 100 MB Archives files are recommended. FreeFileUpload 50 MB 50 MB per file, 500 MB max. total. FreeWebTown 1 GB 1 GB total storage limit. GigaSize.com 300 MB 600 MB file limit for free registered accounts. HotLinkFiles 50 MB 1 GB storage, 8 GB monthly max. transfers. JumboFile.com 100 MB Inactive files are deleted after 10 days. JustUpIt.com 170 MB Not much else is known. KeepMyFile.com 60 MB 300 MB total limit. Supports image hosting. Files are deleted after 40 days of inactivity. Load.to 300 MB No bandwidth restrictions on downloads. mailbigfile.com 100 MB Works via email notifications. Files are deleted with3days upon non-download. megarotic.com 500 MB Inactive files deleted after 21 days - use the ‘video’ feature to view submissions. MegaShare.com 50 MB No limit on # of files able to be uploaded. MegaShares.com 1.5 GB Supports uploading of entire folders. MegaUpload.com 500 MB 90 day file holding on free registered accounts; 21 days for anonymous uploads. MediaFire.com 1 GB Great services. Supports image hosting, folder sharing and online directories. Mediamax.com 10 MB 25 GB Storage, 1 GB monthly bandwidth allowance, 10 MB max. file size sharing. Nakido.com 99 GB 99 GB limit witha50-year file retention. Could all this really be true?! OSCDN.com 100 MB Inactive files deleted after 30 days. QuickSharing 500 MB Inactive files deleted after 30 days. RapidShare.com 100 MB No limit to # of uploaded files. RapidShare.de 300 MB Supports multi-uploads. RapidUpload 300 MB Inactive files deleted after 30 days. Savefile.com 60 MB 100 MB file limit for free registered accounts. SaveFiles.net 90 MB Neat feature - browse the latest uploads. SenditAnywhere 1 GB Works via email notifications. Files are deleted with7days upon non-download. SendMeFile.com 50 MB Inactive files deleted after 14 days. SendSpace.com 300 MB Inactive files deleted after7days. SendThisFile none? Requires registration. Apparently no limit on file sizes - works via email notification. SimpleUpload 300 MB Supportsa“FreeFolders” option for storage. SnapDrive.net 500 MB Has online storage as well as 1-click uploading support. Fast upload! SpeedShare.org 200 MB Supports multiple simultaneous uploads. Speedy Share 30 MB Small upload file size limit. Spread-It.com 500 MB Inactive files deleted after 14 days. TinyLoad.com 100 MB Good service that uploads files to4popular 1-click hosting sites. Great for warez! Transfer BF 1 GB Minimum5day storage. TurboUpload 100 MB Supports email notification of uploaded files. UltraShare.net 50 MB Supports email notification of uploaded files. Up-File.com 1 GB No time limit on held files. UploadPower 100 MB Supports multiple uploading formats. WooFiles.com 1 GB No limit on # of uploaded files. WebFileHost 500 MB Inactive files deleted after 30 days. YaStorage.com 1 GB Good upload speeds, free 1 GB file service. YouSendIt.com 100 MB 100 max. downloads per file, 1 GB max. bandwidth per file. Lame!! zSHARE.net 100 MB Inactive files deleted after 60 days. zUpload.com 500 MB Inactive files deleted after 30 days, no limit on uploaded files.
ဒါကတော့ Downloader တစ်ခုပါပဲ . သူလဲ နာမည်ရနေတဲ့ Downloader တစ်ခုပါ. လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်ထားလိုက်ပါ. အဆင်ပြေအောင်လို့ ဆိုက်အတော် များများကနေ တင်ပေးထားပါတယ် . အောက်က Download link ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ tinypaste စာမျက်နှာကို ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် . ရောက်သွားတာနဲ့ အဲ့ဒီ့စာမျက်နှာမှာ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ . hotfile, rapidshare, mediafire, megaupload, ifile link စတဲ့ ဆိုက်တွေကနေ တင်ပေးထားတဲ့ လင့်တွေ ကို တွေ့ရမှာပါ . အဲ့ထဲက ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကနေ Download လုပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်သုံးသူများ လိုင်းအား ပိုကောင်းလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ။
ဒါလေး ကတော့ လက်ဖြစ်လေးပေါ့. အင်တာနက် လိုင်းအား ဘယ်လို ကောင်းလာ အောင် လုပ်ရမလဲ၊ ဆိုတာလေးကို video ဖိုင်လေးနဲ့ ပြထားတာပါ။ လက်တွေ့ အသုံးချကြည့်ပါ။ သုံးရတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းဟာ ယခင်ကနှင့် ယခု ယှဉ်ကြည့် လိုက်ပါ။ ဒီနည်းလေးဟာ တစ်ကယ့်ကို လွယ်ကူတယ် ဆိုပေမယ့် အထင်မသေး ပါနှင့် တကယ့်ကို အင်တာနက် speed မြန်လာပါ လိမ့်မယ်. Read More
Orbit Downloader ကို ဘယ်လို အသုံးပြုရလဲ ??
ကျွန်တော် ဒီနေ့တော့ Orbit Downloader နှင့် Program, Music နှင့် အခြား File များကို ဘယ်လို Download လုပ်ရလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ် .အောက်မှာ ဓါတ်ပုံများနှင့် တစ်ပုံချင်းစီကို ရှင်းပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးပဲ ရှင်းကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . Orbit Downloader ဆိုတာဘာလဲသူက Downloader တစ်ခုပါ . Free ဖြစ်သလို . သူ့ရဲ့ Download speed ဟာ အတော်လေးကို မြန်ဆန်တာကြောင့် Downloader Tools များထဲမှာ တစ်ခြားငွေကြေးပေးရတဲ့ Download Manager နှင့် ရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ အတော်အသင့် နေရာယူလာတဲ့ Downloader တစ်ခုပါ.ဘယ်လို Download လုပ်ယူရမလဲပထမဦးဆုံး http://orbitdownloader.com ကို သွားပါ . ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ ကို နှိပ်ပါ။ကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ http://download.cnet.com ဆိုက်မှာ uploading တင်ထားတဲ့ Orbitdownlaoder ဆီကို ရောက်သွားမှာပါ . (စကားမစပ် ပြောပြပါဦးမယ် http://download.cnet.com ဆိုက်ဟာ microsoft company ကနေ အခမဲ့ Free ware များကို Download လုပ်လို့ရအောင် အခမဲ့ uploading တင်ပေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပါ . အတော်လေးကို စုံတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်တစ်ခုပါ.) အဲ့မှာတင်ထားတဲ့ Download Now ဆိုတဲ့ နေရာကို click နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Download လုပ်ဖို့ link လေး တစ်ခု ကျလာပါလိမ့်မယ် . Download လုပ်လိုက်ပါ ။အကယ်၍ Download link မကျလာပါက အခုလို click here ဆိုတဲ့နေရာကို နှိပ်ပြီးတော့လဲ Download လုပ်ယူလို့ ရပါတယ် ။အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ ရလာတဲ့ orbit Downloader ကို Install လုပ်လိုက်ပါ။လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုပါ အောက်မှာ တစ်ပုံချင်းစီ ပြပေးထားပါတယ် . ရှင်းမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .ကဲ အပေါ်ကအတိုင်း install လုပ်ပြီးသွားရင်တော့ ဒီကို သွားလိုက်ပါ။ ကဲပြီးရင်တော့ ဆိုတဲ့ icon လေးကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ပြီးရင်တော့ အခုလို box လေးကျလာရင် install now ကို နှိပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ။ အားလုံးပြီးသွားရင် firefox ကို restart လုပ်မှာလား မေးပါလိမ့်မယ် ။ OK ပေးလိုက်ပါ။ Firefox နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပွင့်လာတာနှင့် ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တာကို Download လုပ်လို့ ရသွားပါပြီ။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ ပါစေဗျာ။Download ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ် ဒီမှာ Download လုပ်နည်းများ အကြောင်းကို ရေးခဲ့ပြီးသားပါ . အပေါ်ကအတိုင်းသာ လုပ်ထာမယ်ဆိုရင် အခု Download လုပ်နည်းများ အတိုင်း Download လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ. အရင်က Save ဆိုတဲ့ box တစ်ခုပေါ်လာတဲ့နေရာမှာ orbitdownlaoder တစ်ခုပိုလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒါကတော့ video editing စာအုပ်လေးပါ . ဟိုတစ်လောက တောင်းဆိုထားတဲ့ ညီလေးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . မြန်မာလို ရေးထားတာ လေးပါ. video editing သမားများအတွက် အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါတယ် . လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ . လိုချင်သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ .
XP keys changer
This application help you to input real key in your unvalidated Windows XP in order to run instantly all needed updatesကဲ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လို့ ရပါတယ် . up4vn.com | Rapidshare | Megaupload | Depositfiles | Ifile.it | Hotfile
မသိစေချင်တဲ့ Folder များကို ဖွက်ထားချင် သူများအတွက်
ဒါကတော့ မိမိ ကွန်ပျူတာထဲမှာ တစ်ခြားသူ မမြင်စေချင်တဲ့ ဖိုင်များကို hidden လုပ်ထားချင်သူများ အတွက်ပါ. manual လုပ်နည်းတော့ ရှိပါတယ် . ဒါပေမယ့် လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိသေးပါဘူး . သူ့အတွက် သီးသန့်လုပ်ထားတဲ့ Program ဆိုတော့ အားသာချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ် . သုံးကြည့်လိုက်ပါ . ဟိုတစ်ရက်က ညီငယ် တစ်ယောက် မေးထားတာလေးကိုလဲ ဖြေပေးရင်းပါ. HDD တစ်ပိုင်းလုံးကို ဖျောက်ထားမယ် Lock ချထားမယ်ဆိုရင်လဲ ရပါတယ် .. window7ကို support လုပ်ပါတယ် . ကဲ program လေးက ဖိုင်တွေကို ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်သလဲ ဆိုတာ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ . ဒါက ကိုမိုးပြောလို့ ပြန်ပြီးဖြည့်လိုက်တာပါ . window အသစ် တင်မယ်ဆိုရင်လဲ သူကပြဿနာ မရှိပါဘူး . Hide လုပ်ထားမယ်Lock ချထားမယ် Hide လုပ်ထားပြီး အပြင် Lock ပါချထားမယ် Read Only ဆိုပြီးတော့ methods လေးနည်းရှိပါတယ် . အဲ့မှာ ကိုလိုချင်တဲ့ method ကို ရွေးပေး လိုက်ယုံပါပဲ။ သူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဖိုင်အရေအတွက်ကို ကန့်သတ်မထားပါဘူး . Unlimited ပါ မိမိကြိုက်သလောက် ဖိုင်တွေကို အထက် methods (၄) နည်းအတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ် . NTFS, FAT32 နှင့် FAT format တွေဖြစ်ရပါမယ် . မိမိ hidden လုပ်ထား lock ချထားသော ဖိုင်များကို တစ်ခြား တစ်စုံတစ်ယောက်က ဖျက်ဆီး ပစ်မယ် ဆိုတာတောင်မှ အဲ့ဒီ့ဖိုင်ဟာ ပျက်စီးမသွား ပါဘူး .(or)
RAR file တွေ Corrupted ဖြစ်လျှင်ဖြင့်
လပြည့်ဝန်း : အစ်ကိုရေ win rar က ဖိုင်ဖြေတဲ့ အခါမှာ error ပဲ ပြနေတယ် . ကူညီ လို့ရရင် ကူညီပေးပါဦး .တစ်ချို့သော Rar ဖိုင်များကို ဖိုင်ပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာ error ဖြစ်ကြပါတယ် . အဲ့ဒါကလဲ win rar ရဲ့ အားနည်းချက် တစ်ခုပါ . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် အဲ့ဒီ့ ဖိုင်ကို တစ်ခြားနေရာတွေကတေ လိုက်ရှာပြီး Download ပြန်လုပ်ယူတဲ့ နည်းကို မသုံးဘဲနှင့် Win Rar ထဲမှာပဲပါတဲ့ Repair Tools နဲ့ပဲ ဖြေရှင်းကြည့်ရအောင် ဒီနည်းကိုလဲ အရင်က ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ . အခုက နှစ်နည်းနှင့် ရေးပြလိုက်ပါ့မယ် .ပထမနည်းမိမိ error ပြနေတဲ့ Win Rar file ကို ဖွင့်လိုက်ပါ (Double click)Tools >> Repair Archive (သို့) Tools Bar မှာ သူနာပြု logo ပုံစံလေးနှင့် Repair Archive tool ရှိရင် အဆိုပါ Tool ကို နှိပ်လဲရပါတယ် .(ပုံ-၁)(ပုံ-၂)မှာလိုမျိုး မိမိ save ချင်တဲ့ နေရာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ .(ပုံ-၃) မှာလိုမျိုး အားလုံးပြီးသွားရင် Done ဆိုတဲ့ စာတမ်းပေါ်လာမှာပါ . အဲ့ဒါဆိုရင် Close ပေးလိုက်ပါ.ဖိုင်ကို ပြင်ပြီးသွားရင်တော့ (ပုံ-၄)လိုမျိုး ဖိုင်အသစ်တစ်ဖိုင် မိမိ save ထားတဲ့နေရာမှာ ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် .ဒုတိယနည်းဒီနည်းနှင့်ဖြေရှင်းဖို့ကတော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ Rar Repair tool ကို Download လုပ်ပြီးတော့မှ ဖြေရှင်းလို့ရမှာပါ. version 4.0 ကို တင်ပေးထားပါတယ် . လုပ်ရမှာက အောက်ကပုံတွေထဲကအတိုင်း တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်သွားလိုက်ပါ .အောက်မှာပေးထားတဲ့ Repair tool ကို Download လုပ်ပြီး . စက်မှာ install လုပ်လိုက်ပါ.(ပုံ-၁) မှာလို Browse ကနေ error ပေါ်နေတဲ့ rar ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ(ပုံ-၂) မှာလို သိမ်းဆည်းမည့် နေရာတစ်နေရာကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။(ပုံ-၃)မှာလို ဖိုင်ပြင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသွားကြောင်း တွေ့ရမှာပါ. အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ မိမိသိမ်းခဲ့တဲ့နေရာမှာ win rar ဖိုင်အသစ်ကလေး တစ်ဖိုင်ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် .
rapidshare Download လုပ်ဖို့ premium account မရှိသူများ အတွက်ပါ . စမ်းကြည့်တာ window7ကိုတော့ support မလုပ်ပါဘူး . ကဲ လိုချင်တဲ့ သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ . အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . password : www.nyinaymin.com
.exe icon ကို ဘယ်လို ပြောင်းမလဲ
ဒါကတော့ ညီငယ်လား ညီမငယ်လား မသိဘူး လာမေးနေလို့ ကျွန်တော် ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အစက မတင်ဘူးလို့ဘဲ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို သိစေချင်တာ တစ်ချက်ကိုလဲ ပြောရင်းနဲ့ ပို့စ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . ဘာကို သိစေချင်တာလဲ ဆိုရင် တစ်ချို့တွေက မိမိ Download လုပ်ထားတဲ့ program ဟာ တစ်ကယ် အမှန်အကန်လား virus လားဆိုတာကို သေချာ မစစ်ဘဲ ဖိုင်တွေ့ရင် Double click ပဲ နှိပ်တတ်တဲ့ သူများအတွက် virus ဆိုတာ ၀င်ရလွယ်ကူပါတယ် . virus ဆိုတာကလဲ သူ့ဟာသူ နေရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး . အင်း ကိုကိုယ်တိုင်က သွားပြီးတော့ virus ဖိုင်ကို Double click(run) လိုက်တာနဲ့ အဲ့ဒီ့ virus ဟာ စပြီးတော့ အလုပ်လုပ်တာပါ . အဲ့တော့ တစ်ကယ့်တစ်ကယ် "virus ၀င်တယ်" "virus ၀င်တယ်" နဲ့ တရားခံက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆိုတာကို မသိကြဘူး. မိမိ နှိပ်လိုက်လို့ ၀င်သွားတဲ့ virus ကို သူများကပဲ stick ထိုးပြီး ထည့်သွားသလိုလိုနဲ့ ပြောတဲ့ သူများကိုလဲ တွေ့ခဲ့ရဖူးပါတယ် . virus အများဆုံးခိုအောင်းနေ နိုင်တဲ့ ဆိုက်တွေဟာ porn ဆိုက်တွေပါ . အဲ့တော့ porn ဆိုက်တွေမှာ ဒီအတိုင်းလေး ကြည့်နေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး .အင်းဟိုဟာနှိပ် ဒီဟာကလစ် ဆိုရင်တော့ဖြင့် virus က ရှေ့ဂျွန်းတွေ နောက်ဂျွန်းတွေ ပြစ်ပီးတော့ကို ၀င်လာမှာ . ကွန်ပျူတာက သတိပေးရင်လဲ ဘာပေါ်တာလဲ မကြည့်ဘူး YES (or) OK ချည်းပဲ နှိပ်လိုက်တော့ . သွားလေပြီ kaspersky ကလဲ မနိုင်တော့ဘူး . ဘယ်နိုင်မလဲ virus ပါတဲ့ ဖိုင်ကို install လုပ်မှာလား . ဘာညာ မေးလာရင်လဲ ပါလား မပါလာလား မကြည့်တော့ဘူး . Ok ပဲ ကိုင်ထည့်လိုက်တော့ . ကိုကတော့ အိုကေပါရဲ့ ခဏနေကျတော့ kaspersky လဲ မနိုင်တော့ဘူး . ကွန်ပျူတာမှာလဲ ဟိုဟာက ထဖောက် ဒီဟာက ထဖောက်နဲ့ ဖြစ်ကုန်ရော. ဖြစ်မှာပေါ့ . ရှေ့မှာခံထားတဲ့ kaspersky နှင့် အခြား antivirus program တွေကို နဘန်ကျင်း၊ ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ပြီးတော့ ၀င်ခွင့် ပေးလိုက်တော့ . သူတုိ့ကလဲ ဘယ်လို လုပ်ပြီးတော့ တားနိုင်တော့ မှာလဲ . ခဏနေကျတော့ သူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တဲ့ anti virus program ကို အပြစ်ပြောပါလေကော . တင်ထားလိုက်တဲ့ ဘယ် antivirus program ကဖြင့် သောက်သုံးကို မကျဘူး . ဒီ virus ကိုတောင် မသတ်နိုင်ဘူး လုပ်ပါလေရော . တရားခံက ကိုဆိုတာကို မသိဘူး . တစ်ကယ်တော့ antivirus program ဆိုတာဟာ HDD ထဲကို ၀င်မယ့် file နှင့် Program တွေကို virus မပါသွားရလေအောင် . စစ်ဆေးပေးတာပါ . မြို့အ၀င်က ဂိတ်စောင့်နှင့်တူပါတယ် . မိမိကတော့ သူကြီးပေါ့ . ဂိတ်စောင့်က ဘယ်လိုမျိုး တားတား ကိုကိုယ်တိုင်ကိုက ၀င်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် ဂိတ်စောင့်လဲ မနိုင်တော့ဘူး . ဒါလေးတွေကို သိထားဖို့တော့ လိုပါတယ် .နောက်တစ်ခု သိထားသင့်တာလေး ပြောပါဦးမယ် . အဲ့ဒါကို လူတိုင်း မသိကြဘူးဗျ . ဘာလဲဆိုရင် မိမိ HDD ထဲမှာ antivirus program မတင်ခင် ကတည်းက virus က ရှိနှင့်ထားပြီးသားဆိုရင် ဘယ် antivirus ကိုပဲ Install လုပ်လုပ် 85% လောက်ဟာ မရဖို့များပါတယ် . ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် virus တိုင်းလိုလိုဟာ သူတို့ HDD ထဲမှာ ရှိနေပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ virus က ဘာတွေအရင်ဆုံး လှုပ်ရှားမလဲသိလား . antivirus program လို သူ့ကို တိုက်ခိုက်မယ့် ရန်လုပ်မယ့် program မျိုးကို install လုပ်လို့မရအောင် ကာထားမယ်ဗျာ . နောက်တစ်ခုက task manager လိုမျိုး သူ့ကို ရပ်တန့်အောင် ပိတ်နိုင်မယ့် Tools မျိုးကို ဖျောက်ထားတတ်ကြတယ် . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တာက window တင်ပြီးတာနဲ့ antivirus program ကောင်းကောင်း (kaspersky 2010)ကို တင်ထားသင့်ပါတယ် . ပြီးတော့မှ တစ်ခြား program တွေကို install လုပ်ပါ . အဲ့ဒီံတစ်ချက်ကလေးကို သတိထားပေးရင် အဆင်ပြေပါတယ် . ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း သိသင့်တာလေးတွေ ရေးပေးပါဦးမယ် . အခုက .exe ရဲ့ icon ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ ဆိုတာကို ပြောဖို့ကနေ ဘယ်ရောက် သွားမှန်း မသိပါဘူး . ဘယ် program ကိုမဆို (virus program အပါအ၀င်) program ရဲ့ icon ကို ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ် .ဖိုင်တစ်ခုကိုဗျာ gmail hacking tool လို့ နာမည်ပေးလိုက်မယ် .icon ကို မှန်ဘီလူး ကိုင်နေတဲ့ပုံလေး ပြောင်းလိုက်မယ် . ပြီးရင် ဆိုက်မှာသာတင်ကြည့် မသိတဲ့သူဆိုရင် ဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတာနဲ့ ဟာတွေ့ပြီဟေ့ ပွတာပဲ ဆိုပြီး တန်းပြီးတော့ လုပ်မှာက Download လုပ်ပြီးတာနဲ့ Double click လုပ်တော့မှာပါ . ဟုတ်လား မဟုတ်လား မစဉ်းစားတော့ဘူး . အဲ့ဒီ့မယ့် kaspersky လဲ မကယ်နိုင်တော့ဘဲ မာလက ဈာန်ကြွရော .ညီလေးရေ အစ်ကိုအောက်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပြောင်းနည်းကတော့ လွယ်ပါတယ် . အတိုချုံးပြီး ပြောပြလိုက်ပါတယ် .icon ပြောင်းနည်း .မိမိပြောင်းချင်တဲ့ logo တစ်ခုကို photoshop သို့မဟုတ် တစ်ခြား ဒီဇိုင်းဖန်တီးလို့ရတဲ့ program တစ်ခုခုဖြင့် ဖန်တီး လိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ သူ့ကို ဆိုက်သေးပြီးတော့ gif နဲ့ သိမ်းလိုက်ပါ . .ico နဲ့ တစ်ခါတည်း မသိမ်းတတ်ရင် မသိမ်းပါနဲ့. နောက်မှ gif (or) Jpeg စတာတွေကနေ .ico ကို ပြောင်းလိုက်ပါ ကျွန်တော် ဆိုက်ထဲမှာ .ico ပြောင်းတဲ့ program တင်ပေးထား ပြီးသားပါ ..ico logo လေးရပြီဆိုရင် . အောက်ကအတိုင်း ပြောင်းပေးလိုက်ပါ . အောက်မှာ တစ်ပုံချင်းစီကို စာနဲ့ ရေးပြီးတော့ ရှင်းပြထားပါတယ် . တစ်ပုံချင်းစီကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ ပုံအကြီး ထွက်လာပါလိမ့်မယ် . ပုံတွေရဲ့ အပေါ်က icon ပြောင်းပေးမယ့် program ပါ. တစ်ခုသတိပေးလိုက်ပါ့မယ် စိတ်မကောင်း စရာကောင်းတာက window7ကို support မလုပ်ပါဘူး .
Dial up connection ဖြင့် အင်တာနက်သုံးသူများ လိုင်း...
မသိစေချင်တဲ့ Folder များကို ဖွက်ထားချင် သူများအတွက...
internet sharing ဘယ်လို ခွဲသုံးမလဲ .